Hopefully South Africans will come and support their neighbours – Chipezeze – FARPost
Hopefully South Africans will come and support their neighbours – Chipezeze
Posted on March 12, 2020 March 11, 2020 by FARPost
With confirmation that the Zimbabwean National team will play their 2021 Africa Cup of Nations Qualifier in South Africa, Baroka FC goalkeeper Elvis Chipezze has urged South Africans to come in numbers to support their neighbours.
Zimbabwe has been banned from hosting international soccer games by CAF because of substandard stadiums.
The Warriors will host the 2019 Africa Champions at Orlando Stadium on March 29 and Mali on April 12.
“Yah like I said before it’s good because South Africa is also our second home because most of the players from Zimbabwe are playing here in South Africa so it’s like our second home,” the Baroka captain told reporters in Polokwane.
“We are just happy that we will be playing there in Orlando because most of the Zimbabweans are there and hopefully South Africans will come and support their neighbours because it will be a good thing,” he added.
Bafana Bafana and Zimbabwe are also set to meet in the 2022 FIFA World Cup qualifiers late this year but it’s unclear if CAF would have reversed their ban on Zimbabwe or the Warriors will have to find an alternative in other neighbouring countries.
SA drawn in ‘Group of Death’ at COSAFA U17 Women’s Champs
Downs make League race interesting